Ahoana ny fametrahana sary ambadika ao amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Androany Photoshop dia mamela antsika hanao zava-mahatalanjona amin'ny faharanitan-tsaina kely ary mahafantatra ny fomba fampiasana fitaovana sasany toy ny fitaovana fifantenana haingana. Ity fitaovana ity dia tsy nisy mandrakizay, ary rehefa fantatra fa ampiasaina dia mamela antsika hisafidy haingana dia haingana hifantoka amin'ny asa hafa.
Noho izany, ankoatry ny fampisehoana aminao ity fitaovana fifantenana haingana ity, hampianatra anao ny fomba hanonganana na hametrahana ambadika sary ao amin'ny Photoshop izahay. Tamin'ny androny, dia nanao tutorial izay ampianarantsika ny fampiasana fitaovana hafa, fa amin'ity iray ity dia mifantoka amin'ilay fitaovana voalaza ihany isika izay hamela antsika hanao asa tena tsara.
Ahoana ny fomba hanesorana na hametrahana ambadika ao amin'ny Photoshop
Hampiasa ny fitaovana fifantina haingana izahay ary handeha hampiasa sary roa azonao sintonina etsy ambany hanatanterahana ilay fampianarana, araka ny nohazavainay tamin'ny horonantsary natao ho an'io fotoana io. Amin'ny alalany dia ho hitanao tsara kokoa ny fampiasana ilay fitaovana sy ireo dingana arahinao.
Manokatra ny sary izahay ny ondrilahy.
Misafidy izahay ny fitaovana fifantenana haingana iza no mihaona amin'ny tsindrona majika.
Tsindrio miaraka amin'izay fanalahidy fanodinana rehefa tsindrio ny faritra samihafa ny mombamomba ny sary hisafidianana an'io ampahany io.
Amin'ny fotoana rehetra dia afaka manao izany isika ampiasao ny fanalahidy «Alt» fa tsy ny sora-baventy hampihena ny faritra izay tsy tadiavintsika, toy ny rehefa mandray ampahan'ny ondrilahy.
Avadintsika ny Control + Shift + I manana ilay ondrilahy.
Izahay dia mamaritra ny safidy miaraka amin'ny fitaovana lasso (L): «Tabilao» hanampiana fifantenana ary «alt» hampihena
Mankany amin'ny varavarankely misy sosona isika, ary tsindrio ny «Manampia sarontava sarimihetsika» eto ambany.
El manjavona ny fiaviana eo alohanay.
Mankany amin'ny kapaoty isika ary tsindrio indroa ao amin'ny sarontava izahay.
Ao amin'ny menio izay miseho, tsindrio ny «Smart Radio», izay hiantoka fa ny volo ao ambadiky ny ondrilahy dia miseho amin'ny antsipiriany.
Mampakatra ny refin'ny radius hatramin'ny 10.
Tsindrio OK ary manana safidy tsara kokoa natao isika.
Izao dia manana isika efa nesorina ny background ary apetakay ny sarin'ny tany efitra hametraka azy any aoriana.
Napetrakay tao aoriana ilay sary voadika an'ny efitra.
Manome izahay Control + T hanitatra ny sary amin'ny alàlan'ny fanalahidy fanovana notsindriana (mba hanana ny masontsivana mitovy amin'izany rehefa mihalehibe).
Hanana ny mombamomba ny sary isika.
Podemos safidio ny sosona roa ary kitiho ny haavony mba hifangaro tsara kokoa ireo sosona roa, indrindra ny amin'ny loko, ny famirapiratana ary ny mifanohitra amin'izany, na koa ny Photoshop no manome ireo soatoavina ireo avy hatrany amin'ny sary> Auto Tone / Auto Contrast ary loko miloko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba hanesorana na hametrahana ambadika sary ao amin'ny Photoshop